tvOS inowedzera mifananidzo nyowani pasi pegungwa uye kubva kuISS | Ndinobva mac
Kugadziridza tvOS 13 yeApple TV yakatangwa kupfuura maawa makumi maviri nemana apfuura. Kunyangwe iyo yekutanga nyaya yekuti iyi nyowani vhezheni yeTVOS inotipa ivo vakaganhurirwaZvinotaridza kuti maseva eApple ari pamusoro pekuwedzera iwo kuburikidza nemaseva avo.
Iyo Cupertino-based kambani yakaparura nyowani screensavers zvese yenzvimbo uye kumashure kwebhawa rakagadzirwa mukufambidzana neBBC. Pakazara, tichaenda kunowana gumi nyowani screensavers iyo inotipa isu yakanaka kuona iyo makorari, zvikoro zvehove uye mune zvese, zvinonakidza mifananidzo yehupenyu hwemumvura.
Aya mapikicha matsva anowanikwa paApple TV kuburikidza neAerials screensaver kwatinogona kuwana zvitsva panoramic maonero, mifananidzo yakatorwa kubva kuISS uye mavhidhiyo egungwa. Apple ingangoda kutanga kutumidza patsva iyi Aerials app / chimiro sezvo mavhidhiyo matsva epasi pemvura asiri emumhepo zviitiko. Hongu, zvinoshamisa.
Mavhidhiyo matsva aripo inowanikwa mu4k fomati, Saka iwe une iyi modhi uye inoenderana TV, unogona kunakidzwa navo zvizere. Aya mavhidhiyo anotiratidza zvikoro zvemabharacudas, jellyfish, zvisimbiso ...
Kuti uve nechokwadi chekuti iwe unogamuchira aya matsva mapikicha, iwe unofanirwa kuve uine iyo screensaver application yakagadzirirwa kuti kuvandudzwa zuva nezuva. Kana izvi zviri izvo uye vasingazviratidze kwauri panguva ino, zvinonyanya kuita kuti mangwana unotova navo vatora pasi pafoni yako.
Izvo chete zvinodikanwa kuti ukwanise kurodha pasi uye kunakirwa neaya matsva mapepa ndeaya Iva nechazvino vhezheni yeTVOS 13, saka kana usati wagadziridza chishandiso chako pane iyi vhezheni itsva, ndicho chinhu chekutanga chaunofanira kuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » tvOS inowedzera mifananidzo nyowani pasi pegungwa uye kubva kuISS
iFixit yatove neApple Watch Series 5 mumaoko ayo